Jarida Laser ee Qalabka Velcro - Goldenlaser
Jarida Laser ee Qalabka Velcro
Xalka Goynta Laser ee Qalabka Velcro
Beddelka hagaajinta walxaha, Velcro® aad bay caan ugu tahay dharka, kabaha iyo warshadaha baabuurta (iyo kuwa kaleba) ee u fudud, guryaha la dhaqi karo iyo raagaya, iyada oo ay ugu wacan tahay awoodda ay u leedahay inay si adag u qabato xiisadda, laakiin si fudud ayaa loo kala saaray marka loo baahdo.
Jillaabyada Velcro® iyo jillaabyada kale ee dhejiska iyo dhejisyada waxaa badanaa laga sameeyaa nylon ama caag. Qaab -dhismeedka gaarka ah ee alaabta Velcro ayaa adkeyneysa in la buuxiyo shuruudaha qaarkood iyadoo la adeegsanayo hababka farsamaynta caadiga ah sida mindiyo iyo hababka feeraha. CO 2mashiinnada goynta laserka ka yimid dahabka ayaa caddeeyay inay ku habboon yihiin jarista alaabta Velcro, oo soo saarta goyn siman oo sax ah oo leh cidhifyo yar oo dhalaalay.
Faa'iidooyinka goynta Velcro adoo adeegsanaya leysarka:
Geesaha la jaray oo la isku daray
Sawirrada qalooca ee adag
Goynta iyo daloolinta hal hawlgal
Goynta qaabab iyo qaabab kala duwan oo kala duwan si loo ballaariyo awoodaha naqshadeynta
Ma laha wax-u-beddel maaddada ah iyada oo ay ugu wacan tahay ka-baaraan-qaadis aan xiriir lahayn
Saxitaan aad u sarreeya iyo saxsanaanta soo noqnoqoshada ee habka goynta
Si otomaatig ah loogu xiro geesaha sababtuna tahay geedi socodka leysarka kaamerada
Ma jiro xirmo aalad, taasoo dhalisay tayo goyn joogto ah oo joogto ah.
Ma jiro dayactir qalab iyo badal
Qaybaha codsiga caadiga ah ee Velcro:
• Kabaha & Dharka
• Boorsooyinka & Boorsooyinka dhabarka
• Qalabka Ciyaaraha
• Waaxda Warshadaha
• Qaybta Baabuurta
• Gear Ciidan & Xeelad
• Daryeel Caafimaad & Shakhsi
• Warshadaha Baakadaha
• Injineernimada Farsamada
Macluumaadka waxyaabaha ee Velcro:
Velcro waa magaca astaanta guud ee loogu talagalay nooc ka mid ah jillaab-iyo-loop-ka-xireyaasha oo ay calaamadisay Kooxda Velcro Group ee shirkadaha. Ku dhejiyaha wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: xariijin dhar toosan oo leh qabatooyin yaryar oo 'ku rakibi kara' maro kale oo leh siddooyin yar yar, oo si ku -meelgaar ah ugu dheggan, ilaa laga kala gooyo. Waxaa jira noocyo kala duwan oo Velcro ah, oo ku kala duwan cabbirka, qaabka iyo codsiga. Warshadaha Velcro, tusaale ahaan, wuxuu ka kooban yahay silig bir ah oo suuf ah kaas oo bixiya isku xirnaanta giijiska sare ee codsiyada heerkulka sare. Macaamilka Velcro wuxuu caadi ahaan ku yimaadaa laba qalab: polyester iyo nylon.
Isticmaalka Velcro way kala duwan tahay waxayna leedahay xorriyad heer sare ah. Waxaa loo adeegsadaa codsiyo aad u kala duwan oo dibadda ah, dharka, warshadaha, baabuurta iyo qaybaha dayax -gacmeedka. Awoodda jiidista xooggan ee Velcro waa mid wax ku ool ah xitaa deegaanno adag.
Xaalado badan macaamiishu waxay rabaan inay ka gooyaan qaabab kala duwan walxaha velcro. Nidaamyada goynta laser waxay kaa caawin kartaa badeecadaada inay la kulanto tilmaamaha saxda ah. Mashiinka goynta laser-ku , oo ay weheliso naqshadeynta iyo barnaamijka CAD, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si buuxda u habayso maaddadaada codsi kasta oo wax soo saar ah. Si buuxda otomaatig uga shaqaynta duubabka ayaa suurtogal ah iyadoo ay ugu wacan tahay nidaamka gudbiyaha iyo quudiyaha otomaatiga ah.
Waxaan kugula talineynaa mashiinada laser-ka soo socda ee jarista qalabka Velcro:
CO2 Laser magaabay oo leh Quudiyaha Roll
Aagga Shaqada 300mm × 200mm
Awood Laser: 65W ~ 150W
Kali Madaxa / Madaxa Labaad CO2 Laser magaabay
Qaab No.: MJG-160100LD
Aagga Shaqada 1600mm × 1000mm